Angikwazi ukungena ku "Contact". Yini okumelwe uyenze? Kungani ngingakwazi ukuya "VKontakte"?
Ukuxhumana nomphakathi kungenziwa okuthiwa iyingxenye ebalulekile ezimpilweni cishe wonke umuntu ezweni lethu. Ukuxhumana, ukufinyelela amafayela emidya, ukubeka izithombe zabo namavidiyo - konke lokhu sekuvame futhi ajwayelekile. Kodwa ngezikhathi ezithile Abasebenzisi abaningi kunenkinga ukufinyelela izinsiza owaziwa - "VKontakte" futhi "Ofunda nabo". Kulesi sihloko sizoxoxa yezimbangela ezivame kakhulu futhi kanjani ukuxazulula lezi zinkinga.
Njengomthetho, umsebenzisi ongenalwazi kunzima ukuthola indlela yokuphuma kulesi simo. Yebo, i-computer sivuliwe, egijima kahle, kodwa uma uqala izinkinga Inthanethi uqale. Ngokwesibonelo, iwindi kuvula esibatshela ukuthi ubuyekeze uhlelo isiphequluli noma yokusebenza yakho, thumela i-SMS ku ukufinyelela kwisayithi, nokunye. Konke kuncike umcabango nabaphangi abasebenzisa abasebenzisi uthando lokufunda ukufunda nokubhala. Bayibiza ukuduma nokunyazima kombani ku "yensimbi langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi" iphawundi ku "yabambelela" futhi ngilidlale amabhlogo uhlelo. Ihaba, yebo, kodwa ngaphandle ungafuni ukuba siphazamise intukuthelo ngale ndlela? Akubalulekile ukuba aphule ikhompyutha. Akufakiwe "Contact" umsebenzisi akulona iphutha umshini ezineshwa. Zonke daba uhlelo iThrojani. Kulokhu, lo unqulo wesi arab ngeke babone amafayela onegciwane, ngoba nje zishintshile idatha, kanye igciwane ayikanye. Siza lapha kungaba kuphela faka isiphequluli noma uhlelo lokusebenza.
Izizathu ukungatholakali yokuxhumana
Ngakho, uma Angikwazi ukungena ku "Imininingwane" futhi "Ofunda nabo", ngidinga ukwenza izinyathelo ezilandelayo:
Skena kukhompyutha yakho ngezifo. Kungenzeka yokuthi spyware ukuvimbele unqulo wesi arab yakho, ukuze isidingo ufake inguqulo ehlukene. Kodwa ngokuvamile, ngeshwa, lesi senzo akusho ukuxazulula inkinga, nakuba ambalwa amagciwane ungenzi ukuqeda
Hlola i-Internet. Ngokuvamile, i-computer sibonisa ukuxhumeka kunethiwekhi, kodwa ngqo kwi-Inthanethi akusebenzi. Hlola ukufinyelela kwamanye amasayithi, futhi uma ekhona, bese uqhubeka. Uma kungekho uxhumano lwe-Inthanethi, udinga baxazulule inkinga.
In the ukungabikho amagciwane noma ngemva imithi yabo, kodwa akudingeki ukufinyelela kumasayithi, hlola ifayela Sebawoti. Ungayithola kuleli kheli elilandelayo: C: \_ Windows \_ system32 \_ abashayeli \_ njll Ngaphambi kwalokhu, ungakhohlwa uvule isibonisi amafayela ezifihliwe. Vula Sebawoti unga pad. Okulandelayo, hlola zonke imigqa ususe lezo lapho igama elivamile elithile engosini yokuxhumana.
Uma ungakwazi ungene ngemvume "Imininingwane" nge-computer ehhovisi, ukufinyelela cishe, umqashi ukuvimbele abasebenzi cha thikazisa emisebenzini yabo. Kulokhu, wena yini awukwazi ukukwenza.
Phinda ufake i-browser, njengoba kungase zikhutshaziwe. Ezimweni eziningi, kuba lula ukuba ubuyekeze uhlelo, kunokuba ubheke iphutha.
Kwenzeka futhi ukuthi igciwane alikho, uxhumano kuyinto evamile, konke kusebenza, futhi indoda iphula ikhanda lakhe futhi awukwazi ukuqonda ukuthi kungani akufakiwe "Contact". Akukhona njalo inkinga itholakala igciwane nokuhluleka ohlelweni lokusebenza. Ngokuvamile, abaphathi we ikhasi ikhiyiwe ku "Contact Us". Okufanele ukwenze kuleli cala? Uma umbiko ubonisa ukuthi isilinganiso yesikhashana, futhi ungakwazi ukufinyelela kabusha, landela imiyalelo. Kungase kube ukuthumela umyalezo, ngokugcwalisa lemibuzo, izimpendulo zemibuzo. Ngemva uchungechunge ukwelashwa, ngokuvamile ukubuyiselwa etholakalayo. Kungani ukuvimba khasi? Uma ungenalo ukuthumela izimemo, asiluthengisi imikhiqizo ke cishe wena umane waphula. Ngakho ngemva kokuphindela e-ukufinyelela edingekayo ukuze ushintshe iphasiwedi yakho.
Uma ufunde lokhu kude, khona-ke Usangene yokuxhumana. Ake sizame ukuya kwamanye amasayithi Russian. Lokhu kuyadingeka ukuze uhlole izinga opharetha. Kwenzekani wukuthi iphutha labo uvimbele ukufinyelela izingxenye izinsiza Inthanethi, kuhlanganise Russian. Uma une ukufinyelela ngokwengxenye, thintana nomhlinzeki nsizakalo wakho ukuthola izimbangela zokusebenza okubi kwe-inthanethi.
Sula inqolobane kusiphequluli
Ngakho, mina basalokhu bengakakwazi ukuthola uxhumene, nakuba ukufinyelela kwamanye amasayithi likhona. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuhlanza isilondolozi kusiphequluli. Ukuze wenze lokhu, iya kuzilungiselelo. I "chrome" kwanele ukusebenzisa hotkey inhlanganisela Ctrl + Shift + Susa, ukhethe ithebhu "Susa lezi zinto" - "Ngesikhathi" - "Sula inqolobane" - ususa wonke amanye umkhaza - ". Sula umlando"
Une-Mozilla? Yenza ukulandelana elandelayo: "Amathuluzi" - "Sula umlando" - phambi "Cash" wafaka isheke - "Sula Manje." Ekugcineni, kabusha isiphequluli.
Kuzo zonke lula kakhulu ukuba "Opera", "Amathuluzi" - "Sula Private Data" - "Setting" - "Sula inqolobane" - "Susa".
Uma Angikwazi e "Imininingwane" futhi "Ofunda nabo" ngenxa yalesi sizathu, inkinga ziyoxazululwa. Cha - ngifuna enye indlela yokuphuma.
Ingakulimaza Izinsiza ezengeziwe
Hlola noma khumbula, musa ukufaka uma usanda yimuphi izijobelelo kanye-add-on, ikakhulukazi VkSaver. Izinsiza Abaningi zingaphazamisa isiphequluli. Uma sikhuluma hlelo wathi, ngokuvamile amabhulokhi ukufinyelela ukuba "VKontakte". Ngakho Onjiniyela Vimbela ukulanda okuqukethwe kusukela inethiwekhi. Uma ungumnikazi walolu hlelo lokusebenza, kuba vimbela kuphela / uyisuse, futhi inkinga ziyoxazululwa. Kuyaphawuleka ukuthi uzodinga ngesandla susa ezinye amafayela zitholakala ku: C: \_ Imibhalo ne Zimiso \_ Zonke Abasebenzisi \_ Application Data. Uma kungukuthi isuswe ke ukuqamba kabusha kubo, iqalise computer bese usule.
Kwezinye izimo, Angikwazi ukungena "Imininingwane" kusayithi ngenxa Iqalisa. Kungaphindze kube netikhatsi nezinkinga umhlinzeki, esinikela izinga ukungadli uxhumano Inthanethi. Lokhu kwenzeka ngaso sonke isikhathi, udinga nje ulinde. Uma emini inkinga iqhubeka, landela imiyalelo kulesi sihloko.
Ngaphambili, waya efanayo igama lesizinda, isibonelo, kwi vkonlakte.ru noma vkk.com. Awuboni umehluko, umsebenzisi ngephutha ingena idatha yabo, lona ukuba izigebengu. Khona-ke asuka kukhasi angadingeki kunezelwa zonke izinhlobo amaqembu. Onjiniyela ngokushesha ekuvimbeni akhawunti ebucayini enikeza asemrarweni. Uma onjalo liphindwe izikhathi eziningana, kungenzeka ngempela ukuvinjelwa esaphila. Kulokhu, kuyodingeka uqale ikhasi elisha.
Uma ufaka login yakho nephasiwedi kwaqokonyiswa umyalezo: "Ayikwazi ukuthola ukugunyazwa ukuxhumana okuphephile", khona-ke kumelwe uthuthukise isiphequluli sakho. Kuyaphawuleka ukuthi ezimweni ezinjalo njalo zama ukungena isayithi ngokusebenzisa olunye uhlelo. Zonke ekuqaleni Explorer, ngakho ngokunenzuzo.
Indlela yokuvikela ikhompyutha yakho kusuka amagciwane
Yiqiniso, akunakwenzeka ukuba bavikele ngokuphelele uhlelo kusuka spyware, kodwa izindlela ezivame kakhulu futhi kungase kutholakale ukuze kuncishiswe ingozi:
Lapho isiphequluli kukhompyutha futhi kufanele egijima.
Faka antivirus izinga, uyibuyekeza njalo futhi run a scan system.
Musa ukufaka izinhlelo engabazekayo ungachofozi izixhumanisi nezinye izinsiza, ikakhulukazi kusukela inethiwekhi "VKontakte".
Musa uvule ama-link, ngisho nabangane bakho noma izihlobo kuze, uze ukuhlola ukuthi ingabe nje ukuthumele umlayezo.
Dala ama-akhawunti amabili kukhompyutha: umlawuli umsebenzisi, futhi uya ngaphansi yesibili. Inkinga wukuthi iningi lethu kuziwa umlawuli, futhi ungakwazi ukwenza yonke izenzo. Ngakho, uma benziwa virus ukuhlaselwa ke yiluphi uhlelo kalula ukuwafeza wonke manipulations. Kuleso simo, uma ufaka uhlelo njengoba umsebenzisi, amalungelo akho zilinganiselwe. Futhi lolu hlelo igciwane ngeke bakwazi ukushintsha idatha ku ebhukwini ukusungula software noma thwebula uhlelo.
Ikhasi "Login" livuliwe, kodwa azikwazi ukungena ngemvume "Imininingwane". Yini okumelwe uyenze?
Hlola ngokunemba we kufakwa, isakhiwo amandla / ukukhubaza capslock ukhiye. Mhlawumbe omunye ishintshile iphasiwedi yakho, futhi manje kudingeka ukuthi ayibuyisele.
Hlola iwashi uhlelo. Amasayithi amaningi ukuvimba ukufinyelela uma isikhathi ayivumeliselwanga.
Uma uneminye izinkinga, ngingenile ekujaheni ukubuza umbuzo mayelana nokuthi kungani Angikwazi ukungena ku "Contact". Omunye izenzo zami sokuqala ukuhlola izilungiselelo Amakhukhi. Ngo isiphi isiphequluli "njalo ukwamukela" Kufanele kukhethwe. Futhi uhlanze Amakhukhi, bese uqale kabusha isiphequluli.
ukusetha kabusha iphasiwedi
Kwezinye izimo, abasebenzisi ungatholi ithintane ngenxa yokuthi ukuthi ukhohlwe iphasiwedi yawo. Ngakho kuyomelwe ayibuyisele. Le nqubo ngempela nzima Onjiniyela ukuze kuvinjelwe kwekhasi-ins. Njengoba umkhuba ubonisa, nabakhwabanisi bathole ezinye izindlela ukufinyelela akhawunti zabanye abantu, kuyilapho abasebenzisi abavamile manje nzima kakhulu ukuthola i-khasi lingumsebenzi wakho.
Ngakho, uma Angikwazi ukungena ku "Imininingwane" ngoba iphasiwedi ukuthi ukhohlwe noma esikhundleni ngomunye umsebenzisi, ukwenza Inombolo yezenzo.
Ukusetha kabusha iphasiwedi ebhekisela inombolo yeselula
Ngaphansi Fields ukungena idatha, chofoza "Uyikhohliwe iphasiwedi yakho". Uma ikhasi lakho unamathele ifoni, izinyathelo zimi kanje:
Faka inombolo yakho yocingo;
uhlelo angacela igama lakho, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu nokuvikeleka;
uhlelo uzothumela i-SMS nge ikhodi ukuthi kufanele ufake;
udale iphasiwedi entsha bese uqinisekisa (kodwa ungakhethi usuku lokuzalwa);
efonini yakho izothunyelwa omunye futhi umyalezo, okuzokwenza ukhombise iphasiwedi entsha;
ungene usebenzisa idatha entsha.
Password recovery ngaphandle inombolo yocingo
In the ukungabikho sesibopho ukuthobisa inothi umakhalekhukhwini isixhumanisi ngezansi, okukhomba lokhu isici. Ukuchofoza ke, uthola ithuba ukwenza Inombolo yezenzo:
Ukufaka inamba yakho endala yefoni nokubuyekezwa kwayo;
posi futhi ithumele izithombe ukuze uqinisekise ubuwena;
ugcwalise ngedatha onjiniyela;
ulindele impendulo futhi uvule ikhasi.
Uma ungaqiniseki we ukuthembeka enye idatha (ungakhumbuli ukuthi iyiphi inombolo yefoni noma ikheli le-e-mail ezilotshwe izilungiselelo), akukuhle ukuba ucacise kubo. Gcwalisa ifomu bese uyithumela. Khumbula nje ukuthi izithombe kumele lube sezingeni eliphezulu. Ngokuvamile, uhlelo ucela scan ipasipoti (ikhasi lokuqala nelesibili). Qaphelani wena uthumele lolu lwazi? Khona-ke crank i-akhawunti entsha, njengoba ezinye izindlela uyithole, futhi ngenxa yalokho, ukufinyelela ikhasi lakudala akekho.
Indlela ukubeka "In Touch" izithonjana? izinhlobo Izithonjana
Inethiwekhi ikhompyutha Global
Impendulo enemininingwane yombuzo kungani "i-Wi fi" akusebenzi efonini yakho
Indlela yokwenza "VKontakte" a lot of abangane? izindlela ezaziwa
Uhlu Social Networking: Phezulu izinsiza ethandwa kakhulu sokukhulumisana
My IP-ikheli kunethiwekhi yasendaweni: uwuchaza kanjani novice
Yiziphi ubhatata futhi yini kungenziwa kuphekwe ukuphuma kuso
Fluid for ugwayi electronic Eleaf: Quality - isihluthulelo sempumelelo
Ivanovo esifundeni, sibhedlela Stanko: izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza ibhola disco
Ngiyayizonda umyeni wakhe. Yini okumelwe uyenze?
Indlela yokuthola umsebenzi omuhle Krasnoyarsk?
Izimpawu zekholera nokuphathwa kwayo
Ihhotela 3 * Jungle kuyona (Thailand / Phuket obakhathalelayo.): Ifotho nokubuyekeza